Amerika Amerika - Mag tsy mampino
Torohevitra 4 momba ny fialan-tsasatra an-tendrombohitra any West Virginia Pocahontas County
Raha mikasa ny handeha hitsangatsangana any amin'ny faritra Pocahontas County any West Virginia ianao dia te hahafantatra zavatra vitsivitsy mialoha mba hahafahanao manao ny tsara indrindra amin'ny fiainanao. Ity faritra West Virginia ity dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra…
Fialan-tsasatra any Hawaii
Ny fialan-tsasatra dia zavatra irin'ny tsirairay aorian'ny asa mafy sy asa mafy. Io no fotoana izay hanadinoan'ny olona ny ahiahiny rehetra ary te hiala sasatra sy hankafy ny fotoanany. Manantena fety tonga lafatra izy ireo, ary misafidy amin'ny maro…
Inona avy ireo hetsika mampitsiky anao?
Raha miasa mafy ianao dia mahita fotoana handehanana ary hanao hetsika izay hametahana tsiky ny tavanao? Ny tsy fanananao fotoana mahafinaritra amin'ny fiainanao dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana sy maro hafa. Ka, inona avy ireo hetsika mampitsiky…
Quebec, toerana nahaterahan'i Bon Voyage sy Bon Appetite !!!
Quebec, iray amin'ireo faritany lehibe sy lehibe indrindra any Canada, dia ny tany frantsay ary koa ny tany mahasarika. Miaraka amin'ny zavatra maro hafa an'ity tanàna ity dia malaza amin'ny fetibe Carnaval de Quebec notontosaina tamin'ny volana…
Antony 5 lehibe mahatonga anao hahita ny tolotra Hotel Las Vegas tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatry ny ankohonanao
Aogositra 2, 2017
Amin'ny fandrindrana ny fitsangantsanganan'ny fianakaviananao manaraka dia toerana mety hizaha i Las Vegas. Miaraka amin'ny toerana, hetsika ary fisarihana maro azo isafidianana, ireo faritra ireo dia afaka mandray ny filanao amin'izay fotoana na vanim-potoana amin'ny taona. Ireto misy antony dimy mahatonga an'i Las Vegas…
Toeram-pivarotana fiara 5 malaza indrindra any Amerika
Rehefa mahazo ny vola ianao, ny fanaingoana ny fiaranao dia mety ho zavatra mahafa-po mahatanteraka, na ny manopy ny atiny na ny mamerina azy io amin'ny voninahiny taloha. Fa tsy isika rehetra no loha-kitondro. Izay no antony andoavany vola…
Lisitr'ireo zavatra tokony hatao sy tsy tokony hataony alohan'ny fanofana fiara voalohany
Desambra 30, 2016
Ny fanofana fiara ho an'ny tanjona orinasa na fitsangatsanganana dia zavatra ataon'ny olona matetika. Toa tokony ho dingana mahitsy izany; fa tsy foana! Na dia tsy vao voalohany aza ianao no manofa fiara dia ity misy lisitr'ireo azo antoka…
Ny akanjo fitetezana tsara indrindra: miakanjo tsara rehefa mandeha
Ny fitsangatsanganana dia mitaky drafitra be mialoha, ary ho azonao antoka fa mety tsara amin'ny akanjo ataonao ny fitafianao! Tsy mora foana ny manangona entana, ary ho an'ny sasany, mety ho sahirana ilay izy. Soa ihany fa misy akanjo vitsivitsy izay…